The Rohingya News Bank : ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားလက် မှတ်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု စိစစ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကြောင်း တစေ့တစောင်း
အိမ်တစ်အိမ်၏ အသည်းနှလုံးသည် ထိုအိမ်ထဲ တွင်နေထိုင်သော အိမ်သူ၊ အိမ်သားများဖြစ်သကဲ့သို့ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ ပင်မ မဏ္ဍိုင်သည် ပြည်သူဖြစ် ပါသည်။ ပြည်သူမရှိလျှင် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆိုတာ မရှိနိုင်။ နိုင်ငံဟူ၍လည်း ပေါ်ပေါက်လာမည် မဟုတ် ပေ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ / ပြည်သား/ နိုင်ငံသား၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ပဓာနအကျဆုံးဖြစ်ပါ သည်။ လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းတွင် အစိုးရ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ နိုင်ငံသားအားလုံးတွင် အခြေတည်ပါသည်။ ဆန္ဒမဲပေး ပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံသားတို့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အစိုးရကသာလျှင် အချုပ်အခြာအာဏာ (၃)ရပ်ကို နိုင်ငံ သား/ ပြည်သူတို့၏ကိုယ်စား ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးကြရ သည်ကို ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား (ဖြစ်မှု/ ရွေးချယ်ရေး) အက်ဥပဒေ
ဘုရင်အုပ်စိုးသည့် မင်းနေပြည်တော်သည် နှစ်ပေါင်း ၁၂၄ နှစ်ကြာမျှ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပြီးနောက်၊ ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံ၏ အဓိကလက္ခဏာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော ပြည်သူ / နိုင်ငံသား ဆိုသည်ကို တိတိပပ ဖော်ညွှန်းရန် လိုအပ်လာသည့် အလျောက် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား (ဖြစ်မှု) အက်ဥပဒေကို နိုင်ငံသစ်ပေါ်ထွန်းသည့် ၄.၁. ၁၉၄၈ ရက်နေ့တွင် တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်သုံးလခန့်အကြာတွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(ဃ)နှင့် မဆန့်ကျင်စေရန်အလို့ငှာ ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် (ရွေးချယ်ရေး) အက်ဥပဒေကို ဖြည့်စွက် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် ၃.၁.၁၉၇၄ ရက်နေ့တွင် ၁၉၇၄-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေပါ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှစ်ခုကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံသား ဥပဒေအသစ်ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ခေတ်နှင့် မလျော်ညီတော့သည့်အချက်များကို ပယ်ဖျက် ခြင်း- ဥပမာ ကိုလိုနီနယ်မြေ ၂၀ ခန့်ရှိ အင်ပါယာ အတွင်း မွေးဖွားသူ မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆို၊ ဆန္ဒပြု ရုံမျှဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုခြင်းဆို သည့်အချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေ‌လျှော့ခြင်း၊ ဥပမာ - တစ်နှစ်အတွင်း ကတိသစ္စာ မပြုနိုင်ပါက နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ဆုံးရှုံးခြင်း အစား ငါးနှစ် (အသက် ၁၈-နှစ်မှ ၂၂-နှစ်)အတွင်း ကတိသစ္စာ မပြုနိုင်ပါက ဟု ဖြေလျှော့ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျစွာဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း-ဥပမာနိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပြု / မပြု ဆုံးဖြတ်ခြင်း အာဏာကို ဝန်ကြီးတစ်ဦး တည်းအား အကြွင်းမဲ့ အပ်နှင်းထားခြင်းအစား ဝန်ကြီး လေးဦး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံသားဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဆုံးဖြတ် ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း စသည် ... စသည်... တို့အပါ အဝင် အနာဂတ်ကာလကို မျှော်မှန်း၍ လူ့အခွင့် အရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြည့်၀စေမည့် ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်စေ ရန် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး မူကြမ်း သုံးကြိမ်တိတိ ပြည်သူသို့ ချပြခဲ့ပါသည်။
ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ နှစ်ဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဦးဆောင်သည့် ဥပဒေပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်မှ တတ်သိ ပညာရှင်များ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီး လုပ်သက်ရင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ကာ ပြည်သူတို့၏ အကြံ ဉာဏ်များကို ရယူလျက် ခြောက်နှစ်ကျော် အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ သည့် အထူး ဥပဒေ (Special Law) ဖြစ်ပါသည်။ (၁၅.၁၀. ၁၉၈၂) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေနှစ်ခုကို ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးဥပဒေဖြစ်၍ ကလေး သူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ အပါအဝင် အခြား မည်သည့် ဥပဒေကမျှ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း မရှိသည့် ဥပဒေ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း (၈)တွင် ပါရှိသည့် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လည်း ကိုက်ညီနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ် စကားရပ် များအစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ စကားရပ်အနက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ ငါးဆယ်ကျပ်၊ တစ်ထောင်ကျပ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ကြေးငွေအချို့သည် လက်ရှိ ကာလ ငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့် ယှဉ်လျှင် နည်းလွန်းနေသည်မှအပ ယုံကြည်ကိုးစားထိုက် သည့် ဥပဒေတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှနေ၍ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ကာကွယ်ထားသည့် ဥပဒေတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွင် မွေးရာပါ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဖြစ်တည် လာသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဇာတိ နိုင်ငံသားနှင့် အခြားပင်ရင်းနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချ၍ အနေကြာသူများအား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံသားဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေ အရ ခွဲခြားပြဆိုထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထိုနှစ်မျိုး နှစ်စား စလုံးသည် ထိုနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အခြားပင်ရင်းနိုင်ငံဟူ၍ မရှိ၊ မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် မူလအစကပင် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အစဉ်တစိုက် နေထိုင်ပေါက်ဖွား ဆင်းသက်လာကြသော ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား မွေးရာပါ နိုင်ငံသားများနှင့် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့်နိုင်ငံသားများဟူ၍ ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။ ဥပဒေတွင် အခန်း(၈)ခန်းရှိပြီး ပုဒ်မ (၇၆)ခုပါဝင်ပါသည်။ ဥပဒေ၏ အနှစ်ချုပ်အရဆိုရပါမူ မွေးရာပါနိုင်ငံသားနှင့် ဥပဒေအရ ဖြစ်တည်လာသည့် နိုင်ငံ သား နှစ်မျိုးကို ကတ်ပြား/ လက်မှတ် အမျိုးအစား သုံးမျိုး သတ်မှတ်ပြီး ထုတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားများကို မွေးရာပါ နိုင်ငံသား အဖြစ် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား/ လက်မှတ် (ပန်းရောင်)ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ယခင်ဥပဒေ (၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဥပဒေ)အရ ထုတ်ပေးထားသည့် UCC (Union Certificate of Citizenship ) ခေါ် နိုင်ငံသား လက်မှတ်/ နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ သားသမီးများကိုလည်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား/ လက်မှတ် (ပန်းရောင်) ထုတ်ပေးပါသည်။ (အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။)
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့် (၁၅.၁၀.၁၉၈၂) ရက်နေ့မတိုင်မီက ယခင်ဥပဒေ (၁၉၄၈ ခုနှစ်ဥပဒေ)အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ရန် လျှောက်ထားခဲ့ကြ သော်လည်း ပြီးပြတ်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ အမှုတွဲလက်ကျန်အဖြစ် ကျန်ရှိနေခဲ့သူများနှင့် လျှောက်လွှာတွင်အမည်ပါရှိသည့် အသက် (၁၈) နှစ် မကျော်သေးသော ၎င်းတို့၏ သားသမီး များအား အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် တည်ဆဲဥပဒေ (၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေ)တွင် ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဧည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား/ လက်မှတ် (အပြာရောင်) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ (အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဧည့်နိုင်ငံ သားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါသည်။)
နိုင်ငံသားပြုခွင့် စိစစ်ရေးကတ်ပြား/ လက်မှတ်
လွတ်လပ်ရေးနေ့ (၄.၁.၁၉၄၈) ရက်နေ့ မတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေထိုင်သူများနှင့် ၎င်းတို့မှ နိုင်ငံအတွင်းမွေးဖွားသူ သားသမီးများအနက် (၁၅.၁၀. ၁၉၈၂) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ရန် လျှောက်ထားလာသူများအား ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံသားပြုခွင့် စိစစ်ရေး ကတ်ပြား/ လက်မှတ် (အစိမ်းရောင်) ထုတ်ပေး ပါသည်။
ထို့အပြင် (၄.၁.၁၉၄၈) ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ရောက်ရှိ လာသော နိုင်ငံခြားသားမိဘတစ်ဦးဦး (One Side FRC) မှ မွေးဖွားသူများကိုလည်း အသက် ၂၂ နှစ် မကျော်လွန်မီ ကတိသစ္စာပြုပါက နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံသား ပြုခွင့်စိစစ်ရေး ကတ်ပြား / လက်မှတ် (အစိမ်း ရောင်) ထုတ်ပေးပါသည်။ (အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားရှိပါသည်။) (၁၅.၁၀.၁၉၈၂) ရက်နေ့ မတိုင်မီက လျှောက်ထားခဲ့သူများ သည် ဧည့်နိုင်ငံသား (၁၅.၁၀.၁၉၈၂)နေ့နောက်ပိုင်း လျှောက်ထားသူများသည် နိုင်ငံသားပြု ခွင့်ရသူ များဖြစ်သည်ဟု အတိုဆုံး၊ အရှင်းဆုံးနည်းဖြင့် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရုံးလုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်စွာနှင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်၊ ကတ်ပြားအမျိုးအစားအလိုက် လူတစ်ဦးချင်း၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို ကဏ္ဍခွဲခြား၍ လွယ်ကူစွာ ထိန်းသိမ်း၊ ရှာဖွေ၊ တိုက်ဆိုင် စိစစ်ရန်နှင့် (Visible Test ) မြင်ရုံနှင့် အလွယ်တကူ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်စေရန် အရောင်ပါရှိ သည့် ကတ်ပြား အမျိုးအစား သုံးမျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ထား သော်လည်း ကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူတို့၏ အခွင့် အရေးမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
သဘာ၀အရ ဖြစ်တည်လာပုံချင်း မတူညီသော နိုင်ငံသားအမျိုးအစားအတွက် ပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲရသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဥပဒေများ၏ ရေးထုံးအစဉ် အလာနှင့်အညီ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံသား များအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ (သို့မဟုတ်)ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော အခွင့် အရေးမှအပ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပါနိုင်ငံသား အခွင့် အရေးများကို ခံစားခွင့်ရှိကြောင်း ခြွင်းချက်ခံ၍ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း ထားရှိရပါသော်လည်း ယနေ့ အထိ ကန့်သတ်ထားသော အခွင့်အရေးဟူ၍ မရှိပါ။ နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအားလုံး သည် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မဲပေးခွင့်၊ ပါတီဝင် ခွင့်၊ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် စသည့် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ဥပဒေအရ တူညီစွာ ခံစားခွင့်ရှိ ကြပါသည်။
သို့ရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့် စိစစ် ရေးကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူအချို့သည် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း တက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်မရခြင်း၊ လေလံများ၊ တင်ဒါများ ဝယ်ယူခွင့်၊ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရခြင်း၊ အခွန်အခ များကို နိုင်ငံခြားငွေ (ဒေါ်လာ)ဖြင့်ပေးသွင်းရခြင်း၊ ပြည်တွင်း ခရီးသွားလက်မှတ်ဝယ်ယူရာနှင့် ခရီးသွား လာရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်းများကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအပေါ် ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေပြီး နိုင်ငံရေးပယောဂမကင်းသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် အချို့နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့က တစ်ဖက်သတ် အမြင်ဖြင့် ဝေဖန်မှုပြုလာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေတွင် ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြထားပါသော် လည်း ပုဂ္ဂလိက ထင်မြင် ယူဆချက်များဖြင့် နားလည်မှု လွဲမှားပြီး အကွဲကွဲအပြားပြား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်း၏ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား များအား လ၀ကမှတ်ပုံတင်ဌာနမှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား (ပန်းရောင်) တစ်မျိုးတည်း ထုတ်ပေးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဧည့်နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (အပြာ ရောင်)နှင့် နိုင်ငံသား ပြုခွင့် စိစစ်ရေးကတ်ပြား (အစိမ်း ရောင်)တို့ကိုလည်း ထုတ်ပေးထားပြီး၊ ထိုသုံးမျိုးစလုံး သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်များဖြစ်ပါသည်။ ကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူတို့ ၏ အသွေးအရောင်နှင့် ရုပ်ရည်သွင်ပြင် လက္ခဏာတို့မှာ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကွဲပြားခြားနားနေမည်ဖြစ်သော် လည်း ထိုသူတို့မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထား သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ နိုင်ငံခြားသား (FRC) များ မဟုတ်ကြပါ။ (တချို့က ပြောကြသေးသည် ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုတာ နိုင်ငံသားမဟုတ်၊ ဧည့်သည် နိုင်ငံခြားသား ...တဲ့)
နိုင်ငံခြားသား မိဘတစ်ဦးဦးမှမွေးဖွားသော ကလေး များနှင့် ၁၉၈၂-ခု နိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်
၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ (၉)၌ နိုင်ငံတော်အတွင်း မွေးဖွားသောနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် အ သက်(၁၀)နှစ်ပြည့်လျှင် တစ်နှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ထား သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ် ထိန်း သူက မှတ်ပုံတင်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးတစ်ဦးအား အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့် သည့်နေ့မှစ၍ မှတ်ပုံတင် (နိုင်ငံသား/ ဧည့်နိုင်ငံသား/ နိုင်ငံသားပြု စိစစ်ရေးကတ်ပြား) ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားမိဘတစ်ဦးဦးမှ မွေးသည့် (ကပြား/ သွေးနှော)ကလေးများအတွက် ၁၉၈၂-ခု မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃(က)၌ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား (FRC) မိဘနှစ်ပါးမှ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပ၌ဖြစ်စေ မွေးဖွား သူသည် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင် သည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၉(က) ၌ နိုင်ငံသားပြုလျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ သား/သမီးသည် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်သည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာကို ခံယူကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေများကို ရိုသေလိုက်နာမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော တာ ဝန်နှင့်အခွင့်အရေး များကို သိရှိကြောင်း စာဖြင့်ရေးသား၍ ကတိပြုရမည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ (၅၀)၌ ခိုင်လုံသော အကြောင်း မရှိဘဲ အသက် ၂၂ နှစ်ပြည့်သည့်နေ့မှ ကျော်လွန်သည်အထိ ကတိသစ္စာမပြုနိုင်လျှင် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်မှ ဆုံးရှုံးသည်ဟု လည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အသေးစိတ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သီးခြားပြဋ္ဌာန်း ထားရှိသည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားသားမိဘတစ်ဦးဦးမှ မွေးသော (ကပြား / သွေးနှော)ကလေးသည် ကတိသစ္စာ ပြုရမည့်အချိန်တွင် ပျက်ကွက်ပါက အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံး ပြီး နိုင်ငံခြားသားလတ်မှတ် (FRC) ကိုင်ဆောင်ရမည်ကို စာရှုသူများ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိသဘောပေါက်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံသား(ဖြစ်မှု / အရည်အချင်း) စိစစ်ခြင်းနှင့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယား
နိုင်ငံတော်အတွင်း မွေးဖွားသူနိုင်ငံသားတိုင်းသည် အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့်သည့်နေ့မှစ၍ မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူက မှတ်ပုံတင် (နိုင်ငံသား) လျှောက်ထားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် အရာရှိက လျှောက်ထားသူ (အလွှာရှင်)အား အဓိကစိစစ်ရသည်မှာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဇယား (Family Tree; FT) ဖြစ်ပါသည်။ အလွှာရှင်၏ အဓိကတာဝန်မှာ FT တွင် မိ၊ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘွား၊ ဘေး၊ ဘေးမ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြရပါမည်။ ဘေး၊ ဘေးမအထိ ကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့်လက်မှတ်များရှိပါက သင်္ကေတနှင့်တကွ ဖော်ပြရပါမည်။
မရှိ (သို့မဟုတ်) မမှတ်မိပါက ဘေး၊ ဘေးမ နေရာတွင် မရှိ / မမှတ်မိဟု ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်မှသာလျှင် ဘေး၊ ဘေးမအထိ ဖော်ထုတ် စိစစ်ပါသည်။ များသောအား ဖြင့် ဘိုး၊ ဘွား (၄)ဦး အထိ စိစစ်လျှင် အလွှာရှင်၏ နိုင်ငံသား အရည်အချင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ မိဘနှစ်ဦး၏ အချက်အလက်များ ခိုင်လုံစွာ ဖော်ပြထားလျှင် ဘိုး၊ ဘွား အထိ အသေးစိတ် စိစစ်ရန်မလိုပဲ ပေါ်လွင်သည်များလည်း ရှိပါသည်။ ဥပမာ- မိဘနှစ်ဦး၏ ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ် နှင့် သင်္ကေတသည် အလွှာရှင်လျှောက်ထားသည့် မိမိ၏ ရုံးဌာနမှထုတ်ပေးထားသော ကတ်ပြားများဖြစ်လျှင် (သို့မဟုတ်) မိဘတစ်ဦးသည် နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ် (FRC) ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားလျှင် ဆက်လက်စိစစ်ရန် မလိုတော့ပါ။ မည်သည့်ကတ်ပြား အမျိုးအစားထုတ်ပေးရမည်ကို ဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မွေးစားသား/ သမီးနှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်
မွေးစားသား/သမီးဖြစ်ပါကလည်း အမိရင်း၊ အဖရင်း များကိုသာ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ မွေးစားမိဘများက အုပ်ထိန်းသူနေရာတွင် တာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ ကိုယ်ရေးပုံစံ နိုင်(၂)တွင် မွေးစားကြောင်း အထောက်အထား များ ပူးတွဲ၍ မိဘ၊ ဆွေမျိုးရင်းချာများ၏ အချက်အလက်များ ကို ရေးသွင်းရပါမည်။ ဥပဒေအရ ဖခင်အရင်း၏ အမည်ဖြင့် သာ မှတ်ပုံတင် (နိုင်/ ဧည့်/ ပြု စိစစ်ရေးကတ်ပြား) ထုတ် ပေးရပါသည်။ မွေးစားသား/သမီးသည် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါ က နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ် (FRC) ကိုင်ဆောင်ရပါမည်။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးသည် မြန်မာ နိုင်ငံသား (နိုင် / ဧည့်/ ပြု) တစ်ဦး၏ မွေးစားမှု ခံရရုံမျှဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိ(မရှိ)ကြောင်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ(၇၃)ဖြင့် ကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အချက် အလက်များ လိမ်ညာဖြည့်သွင်းထားလျှင်လည်း ကြာရှည် စွာ ဖုံးကွယ်၍ မရနိုင်ပါ။ (၁၉၅၂-၁၉၅၈)ခုနှစ် မှစ၍ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ မှတ်ပုံတင်ထားသော မိ၊ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘွားတို့၏ မှတ်တမ်းများ ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်း(၄၀)ရုံး၌ ရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား (သုံးခေါက်ချိုး မှတ်ပုံတင်) ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူ ၂၇ သန်းခန့်တို့၏ ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းများနှင့်တိုက်ဆိုင်၍ အလွယ်တကူဖော်ထုတ် အရေးယူခံရမည်သာဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားတွေပဲ၊ ဗမာတွေပဲ၊ ကရင်တွေပဲ ဘိုး၊ ဘွားအထိ စိစစ်စရာလိုသလားဟု တချို့က စောဒကတက် လေ့ရှိကြသည်။ FT တွင် တိုင်းရင်းသားအမည်များပင် ဖြစ်လင့်ကစား ရုံးလက်ခံမှတ်တမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရာ တွင် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လူမျိုးအမည် ကွဲလွဲ နေခြင်း၊ FRC နံပါတ်များဖြစ်နေခြင်း၊ အဖနှင့်အဘိုးတို့မှာ လူတစ်ဦးတည်းဖြစ်နေခြင်းစသည့် ကွဲလွဲချက်မျိုးစုံကို တွေ့ရှိရခြင်းများကြောင့် ဘိုး၊ ဘွားအထိ စိစစ်ရန် လိုအပ်ရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကွဲလွဲချက်ရှိသူများ ဥပမာ - နိုင်ငံ ခြားသွားရန်၊ ဘဏ်ငွေထုတ်ရန် စသည်ဖြင့် လတ်တလော အရေးကြုံ၍ မှတ်ပုံတင်(လ.၀.က)ဌာနသို့ လာရောက် ပြင်ဆင်ရာ၌ ချက်ချင်းပြင်ဆင်မပေးနိုင်သည့်အတွက် နစ်နာသူမှာ ကာယကံရှင်သာဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်ဆင့်ကွပ်ကဲမှုနည်းလမ်းများအရ မြို့နယ်မှူး အဆင့်ကို ပြင်ဆင်ခွင့်အာဏာပေးမထား၍ ဖြစ်ပါသည်။ မ.ဆ.လခေတ်က ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးမှ သူ၏မြေးမှတ်ပုံ တင်၌ ဖခင်အစား ၎င်း၏အမည်ကို ဖော်ပြစေခဲ့ရာ ၎င်းသက်ရှိ ထင်ရှားရှိစဉ်က ပြဿနာမပေါ်ခဲ့ပါ။ ကွယ်လွန်ချိန်၌ အမွေကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ပြီး သားအရင်း များက ထုတ်ဖော်တိုင် ကြားသဖြင့် ထိုစဉ်က တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများ ဌာနဆိုင်ရာမှ အရေးယူခံခဲ့ရသည့် သာဓက ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ဖခင်နိုင်ငံခြားသားကို ဖုံးကွယ်၍ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး၏ အမည်ဖြင့် လိမ်လည်ဖော်ပြ လျှောက်ထားပြီး နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား ကိုင် ဆောင်သူ (နိုင်ငံခြားသားမိဘတစ်ဦးမှ မွေးဖွားသူ) (ကပြား/ သွေးနှော) သမီးနှစ်ဦးအား အုပ်ထိန်းသူမိခင်နှင့် အတူ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့် အရေးယူခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ် ၂၀၁၆-ခုနှစ်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ တိုင်ကြားသူ မရှိ၍ မပေါ်ပေါက်သေးသည့်ဖြစ်စဉ်များလည်း အများ အပြား ရှိနေနိုင်ပါသည်။
အလွှာရှင်များက မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကို မှတ်မှတ်သားသားရှိပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြ၊ ဝန်ထမ်းများကလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် အခြေခံ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်ပြီး အတွေ့ အကြုံရှိ လုပ်ငန်းကျွမ်း ကျင်ပါက နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ (အလွှာရှင်) နှင့် ဝန်ထမ်း များ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပြီး စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ခိုင်မာနေမည်ဆိုပါက ပြဿနာများ ရှိလာမည် မဟုတ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ။